खेलकुद Archives - Page3of 10 -
आजको पत्रपत्रीका बाट : पूर्वविजेतालाई आयोजकको चुनौती
मस्को : रुस विश्वकपअन्तर्गत प्रिक्वार्टरफाइनल चरणको अर्को रोमाञ्चक खेलमा आइतबार पूर्वविजेता स्पेनले आयोजक रुससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । स्पेन र रुसबीचको यो प्रतिस्पर्धा केही फरक हुने निश्चित छ । सन् २०१० को उपाधि विजेता स्पेन अहिले पनि उपाधिको बलियो दाबेदार टोली हो । त्यसभन्दा फरक रुस आफ्नो घरमै खेल्दैछ । उसलाई घरेलु म...
रूस – विश्वकप फुटबल २०१८ अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा समूह ‘जी’ को ट्युनिसियाले पानामालाई २–१ ले पराजित गर्दै सान्तवना जित दर्ता गरेको छ। मोर्डोभिया एरिना सारांस्कमा बिहीबार सम्पन्न खेलमा एक गोलले पछि परेको स्थिती उल्ट्याउदै ट्युनिसियाले २ गोल गरेको हो। ट्युनिसियाको जितमा वाबी खाज्री र बेन युशेफले एक–एक गोल गरे।...
अर्जेन्टिनाको जितमा ‘सेलिब्रेसन’ गर्दागर्दै म्याराडोना अस्वस्थ
एजेन्सी : अर्जेन्टिनाले नाइजेरियाविरुद्ध दोस्रो गोल गरेपछि, अर्जेन्टिनाका चर्तित फुटबलर म्याराडोना अस्वस्थ भए । दर्शकका रुपमा रहेका म्याराडोना मैदानमा खेलका हरेक मुभमेन्टमा प्रतिक्रिया जनाइरहेका थिए । टेलिभिजन क्यामेराहरु बेलाबेलामा उनलाई फोकस गरिरहेका हुन्थे । मेसीले पहिलो गोल हान्दा, निकै खुसी भएर सेलिब्रेसन गरेका...
विश्वकप फुटबल : अाज मंगलबार चार खेलमा अाठ देश भिड्दै, काे-काे भिड्दै?
रूस – रसियामा जारी २१ औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलमा सोमबार (आज) ४ खेलहरू हुँदैछन्। समूह चरण तेस्रो तथा अन्तिम राउन्ड अन्तर्गत आज हुने पहिलो खेलमा समूह सी मा रहेका अष्ट्रेलिया र पेरूले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। खेल फिस्ट ओलम्पिक रंगशालम सोचीमा नेपाली समयअनुसार बेलुका ७ः४५ बाट सुरु हुनेछ। पेरू प्रतियोगिताबाट बाहिर...
विश्वकप फुटबल : अाज सोमबार चार खेलमा अाठ देश भिड्दै, काे-काे भिड्दै?
रूस । रसियामा जारी २१ औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलमा सोमबार (आज) ४ खेलहरू हुँदैछन्। समूह चरण तेस्रो तथा अन्तिम राउन्ड अन्तर्गत आज हुने पहिलो खेलमा समूह ‘ए’ मा रहेका साउदी अरब र इजिप्टबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल भोल्गोग्राड एरिना रंगशालामा नेपाली समयअनुसार बेलुका ७ः४५ बाट सुरु हुनेछ। दुवै राष्ट्र प्रतियोगिताबा...
आज हुने विश्व कपको तीन खेलमा यी ६ देश एकआपसमा भिड्दैछन्, को को भिड्दैछन् ?
रूस। रसियामा जारी २१ औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलमा आइतबार (आज) ३ खेलहरू हुँदैछन्। समूह चरण दोस्रो राउन्ड अन्तर्गत आज हुने पहिलो खेलमा समूह जी मा रहेका इङ्ल्याण्ड र पानामाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल निज्नी नोभागोरोड रंगशालामा नेपाली समयअनुसार साँझ ५ः४५ बाट सुरु हुनेछ। आफ्नो पहिलो खेलमा इङ्ल्याण्डले ट्युनिसियालाई...
आज ब्राजिललाई अघि बढ्ने अवसर
मस्को । ब्राजिललाई रुसमा जारी विश्वकप उपाधिको मुख्य दाबेदार टोलीको रुपमा हेरिएको छ । यद्यपि नतिजाको हिसाबले ब्राजिलले प्रतियोगिताको सुरुआत त्यो हैसियतमा गर्न सकेन, जुन उपाधि दाबेदार टोलीको हुनुपथ्र्यो । ब्राजिल युरोपेली टोली स्विट्जरल्यान्डसँग १(१ गोलको बराबरीमा रोकिन पुग्यो । त्यो बराबरीको नतिजाले ब्राजिललाई प्रिक्वार...
विश्वकप फुटबलमा बिहीबार हुने यी हुन् तीन खेल
एजेन्सी । फ्रान्समा जारी २१ औं संस्करणको फिफा विश्वकप फुटबलमा बिहीबार ९आज० ३ खेलहरू हुँदैछन्। समूह चरण दोस्रो राउन्ड अन्तर्गत आज हुने पहिलो खेलमा समूह सी मा रहेका डेनमार्क र अष्ट्रेलियाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। खेल समारा एरिना रंगशालामा नेपाली समयअनुसार साँझ ५ः४५ बाट सुरु हुनेछ। आफ्नो पहिलो खेलमा अष्ट्रेलिया फ्रान्सस...
साख फर्काउने लक्ष्यमा दक्षिण कोरिया
निज्ने नोभगोर्ड – सन् २००६ पछि पहिलो पटक विश्वकपमा छनोट भएको स्विडेनसँग यसपालि रूसमा प्रेरणादायी सुपरस्टार ज्लाटान इब्राहिमोभिचको साथ रहने छैन। सन् २०१६ को युरोपियन च्याम्पियनसिपपछि इब्राहिभोभिचले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट संन्यास घोषणा गरेपछि स्विडेनको टोली संकटमा पर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर स्विडेनले १२ वर्षको अन...
सशक्त पुनरागमनको प्रतीक्षामा ब्राजिल
मस्को । चार वर्षअघि ब्राजिलले आफ्नै घरमा विश्वकप इतिहासकै लज्जास्पद नतिजा बेहोर्‍यो । सेमिफाइनलमा जर्मनीसँग ७(१ गोलले पराजित भएपछि पाँच पटकको विश्वकप विजेता ब्राजिल अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा समेत ब्राजिल नेदरल्यान्डसँग ३-० गोलले पराजित भयो । छनोट चरण पार गर्दै विश्वकप फुटबलको प्रत...